Niman Guantanamo Laga Damiintay
Xubeera, 18 Feb 2015 (Alldhooftinle.com)
Muxuu Xaq Iyo Xeer Kugu Leeyahay Bani'aadmigu Haddaad Ka Soo Saarto Ama Ka Soo Damiinato Jeel Kharriban oo Aan Xaq Iyo Xuquuq Toona Laga Aqoon?
Shan nin oo bishii Diisanbar laga sii daayey xabsiga Guantanamo ayaa ka cadhaysiiyey dowlada Uruguay oo magangelyo siisay. Nin u hadlayey nimankaa xabsiga kasoo baxay oo la yiraahdo Abu Waa'il, ayaa ku tilmaamay xaaladooda inay xabsi ka soo bexeen mid kalena galeen. Abu Waa'il wuxuu sheegay inay u baahan yihiin shaqo iyo nolol caadi ah.
Madaxweynaha dalka Uruguay Jose Mujica ayaa isagoo ka jawaabayey cabashada nimankan wuxuu sheegay inuu u damqaday markii lix sano loo raadinayey wadan ogolaada lana waayey ayaan ogolaaday inay Uruguay yimaadaan, waraaqihii aqoonsigana markiiba waa la siiyey ayuu yiri madaxweynuhu. "Waxaan ku booqday gurigooda waxaana u sheegay inay shaqa raadsadaan anaguna aanu ka caawin doono arintaa, laakiin nimankan oo nolol raaxo leh ku jiri jirey shaqa kastoo loo helo way diideen" ayuu yiri madaxweyne Mujica.
Madaxweynaha oo ay ka muuqatay inaanu u bogin dhaqanka nimankan ayaa sheegay inay heystaan baasabooro Uruguay ah, isla markaana ay aadi karaan meesha ay doonaan hadii ay dal ku gal heli karaan. Dalka Uruguay oo ah wadamada ugu dhaqaale liita Ameerika waxaa ku nool 3.3 milyan, Muslimiinta degana waxaa lagu qiyaasaa 300 qof.